Home Wararka Maamulka Kismaayo oo digniin kasoo saaray qodida meelaha qabriyadda ah
Maamulka Kismaayo oo digniin kasoo saaray qodida meelaha qabriyadda ah
Maamulka iyo culimadda Magaalada Kismaayo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Jubbaland ayaa ka digay in caro laga soo qaado meel ay ku yaallaan qabriyadda oo ku taalla duleedka Magaalada Kismaayo.
Sheekh Maxamed Axmed Wacdi oo ka mid ah Culimadda Magaalada Kismaayo ayaa sheegay in dadka Caradda soo qoda ay banaanka soo dhigeen Meydad.
Waxaa uu sheegay Sheekha in ay muhiim tahay in dadka Caradda soo qodaa in aysan qodin qabriyadda, laakiin ay ka shaqeystaan meelo ka baxsan qabriyadda.
Guddoomiyaha Magaalada Kismaayo Ibraahin Maxamed Yuusuf Tima Jilic ayaa sheegay in goobtii lagu Aasi jiray Meydadka in Cidii laga qaaday, islamarkaana Meydadkii ay banaanka yaallaan.
Guddoomiyaha Magaalada Kismaayo ayaa sidoo kale sheegay in maamulka Jubbaland ay tilaabo adag ka qaadi doonaan dadka qoda meelaha qabriyadda ah.–